Umatshini wokugcwalisa we-Aerosol, iigloves ezinokulahlwa, iingubo zokuKhusela iingubo - iZhongmaohua
soloko ufumana eyona nto
Funda ngakumbi malunga neyethu Yiya
I-Shijiazhuang Zhongmaohua Trading Co, Ltd igxile kwizinto zokuthintela ezikwenza, zenze kwaye zithengise, iimveliso zethu zithengisile kwihlabathi liphela, ngakumbi e-US, Japan nakwiimarike zaseYurophu, ukuthengisa phesheya kuhlala ngaphezulu kwe-60%.
Yazi ngakumbi malunga nenkampani
ukuhlola zethu Iinkonzo eziphambili
Injongo yethu kwiimveliso ezisemgangathweni ophezulu, iinkonzo zodidi lokuqala, izibonelelo ezifanayo kunye neshishini lokuwina.
Imaski yokulahlwa kweZonyango
Isitshizi kunye noMatshini oMbi
Iimveliso ezisemgangathweni, iinkonzo zodidi lokuqala
I-Shijiazhuang Zhongmaohua Trading Co, Ltd, igxile kwizinto zokuthintela intsholongwane, ukuvelisa kunye nentengiso, iimveliso zethu zithengise kwihlabathi liphela.
Ipesenti yokuthumela kwelinye ilizwe: 91% - 100%
Ukutshintsha: US $ 10 Million- US $ 50 Million
Bangaphezulu kwe-150 abasebenzi
Hayi. Ngemida yemveliso: 5
Hayi. Yabasebenzi be-R&D: 11 -20 yabantu
Hayi. Yabasebenzi be-QC: ngabantu aba-5-10
I-Ostase® BAP EIA
Unokufunda okungakumbi ngathi apha.
Amarike aphambili: Amazwe aseMelika, Mpuma Yurophu, Yurophu, Mantla Yurophu, Ezinye Iimarike, INtshona Yurophu, Ehlabathini Lonke, eAsia, eOceania
Umhambisi / Umthengisi, Umvelisi, umthengisi, Inkonzo, Inkampani yorhwebo
Amazwe aseMelika, iMpuma Yurophu, iYurophu, uMntla Yurophu, Ezinye iiMarike, iNtshona Yurophu, kwihlabathi liphela, iAsia, iOceania
Igubungela indawo eyi-13000 yeemitha zesikwere kunye nabasebenzi abanezakhono ezingaphezu kwe-150 kunye noomatshini abaphantse babe li-100.
Indawo yokusebenzela Veza
Ngoba khetha thina
Siprinta thina kuphela komzi mveliso ungenise oomatshini bokungenisa elizweni i-CNC, oomatshini bokucheba isantya esiphezulu, umatshini wokushicilela weinki kunye nomatshini ozenzekelayo ozimeleyo, okwahlula iimveliso zethu ekumgangatho ophezulu.
Iimveliso ezintsha ziya kumiliselwa minyaka le liqela lethu lobungcali kunye neqela leenjineli ukukhuthaza ukuthengisa kwabathengi. Yonke inkqubo yemveliso iya kutshekishwa ngokungqongqo liqela lethu le-QC ukuqinisekisa umgangatho.
Ukubuza malunga nepricelist
Kususela ekusekweni kwayo, umzi-mveliso wethu ubuphuhlisa iimveliso zodidi lokuqala ngokubambelela kwimigangatho yomgangatho wokuqala. Iimveliso zethu zifumene udumo oluhle kushishino kunye nokuxabiseka phakathi kwabathengi abatsha nabadala ..
mvanje iindaba kunye neebhlog
ngu admin Meyi-07-2020
Iigloves ezilahlayo zePVC
Iigloves ezilahlayo zee-PVC ezilahlayo Iigloves ezilahlayo zePVC ziiglavu zeplasitiki ezilahlayo, ezi ...
Indlela yokwahlula nokusebenzisa ...
Uzahlula-hlula njani kwaye usebenzise impahla yokwahlula yedwa kunye nempahla yokhuseleko yonyango Yintoni umahluko ...
Wamkelekile kwiFektri yethu
Wamkelekile kwiFektara yeyeZethu ngaphambi kokusekwa kwenkampani yethu entsha, sasisebenza ...